2012-04-29 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ရွှေ​ရင်​ကျော်​ဣ​စ္ဆာ​သ​ယ​မ​ဟိ​ဒ္ဓိ​စေ website ​စ​တင်​ရေး​သား​ခြင်း
​ရွှေ​ရင်​ကျော် ​ဝဘ်​ဆိုက် ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​စ​တင်​ရေး​သား​နေ​ပါ​ပြီ. ​အ​ခု​လက်​ရှိ ​မြ​ဝ​တီ ​ရ​ခိုင်​ကျောင်း​တိုင်​ဆ​ရာ​တော်​ကို ​ကု​သ​စဉ် ​ဆ​ရာ​တော်​ခွင့်​ပြု​ချက်​ဖြင့် video ​မှတ်​တမ်း ​ရိုက်​ကူး​ထား​ခဲ့​ပါ​သည်။ ​၎င်း video ​ဖိုင်​အား ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​သည်။ ​ဂိုဏ်း​ဝင်​ထား​ခြင်း ​မ​ရှိ​သော​သူ​များ ​လေ့​လာ​ဖတ်​ရှု့​နိုင်​စေ​ရန်​အ​တွက် ​စ​တင်​ရေး​သား​နေ​ပါ​ပြီ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​ကြောင်း ​ကျွန်​တော့်​အ​နေ​ဖြင့် ​အ​သိ​ပေး​အပ်​ပါ​တယ်.
​ကျွန်​တော့်​အ​နေ​ဖြင့် ​ပ​ထ​မ​ဦး​စွာ ​နော်​ဝေ​နိုင်​ငံ​ရှိ ​ကို​စော​ကျော်​ဦး (​ဝဘ်​ဆိုက်​လှူ​ဒါန်း​သူ​အား) ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​က​နေ ​လှမ်း​ပြီး ​ကု​သ​ခဲ့​ပြီး​ပါ​ပြီ. ​ကု​သ​စဉ်​က video ​မှတ်​တမ်း ​ရိုက်​ကူး​ခဲ့​ဖို့ ​မေ့​သွား​ခဲ့​ပါ​သည်။ ​ကို​စော​ကျော်​ဦး​သည် 1985 ​ခု​နှစ်​တုန်း​က ​မိုင်း​ထိ​ထား​သ​ဖြင့် ​အောက်​ပိုင်း​လမ်း​လျှောက်​မ​ရ​ခြင်း​ကြောင့် ​ဝှီး​ရှဲ​ဖြင့် ​သွား​နေ​ရ​သည့် ​ကျွန်​တော့်​ခင်​မင်​ရ​တဲ့ ​အစ်​ကို​တစ်​ယောက် ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​သွေး​တိုး​နှင့်​ဆီး​ချို​ကို ​ကု​သ​ပေး​ပြီး​မှ ​အ​ခု​ကိုယ်​တွင်း၊ ​ရိုး​တွင်း​ချဉ်​ဆီ၊ ​သွေး၊ ​သား ​ထဲ​မှာ ​ရှိ​နေ​သော ​မိုင်း​ဆိပ်​များ​ကို ​မျက်​စိ​က​နေ​တစ်​ဆင့် ​ရေ​ဇ​လုံ​ထဲ​ကို ​ထုတ်​ပေး​တာ​ပါ။ ​မိုင်း​စ​များ​နှင့် ​မိုင်း​ဆိပ်​များ ​ထွက်​လာ​ပါ​တယ်။ ​နော်​ဝေ​နိုင်​ငံ​ကို ​မြန်​မာ​ပြည် ​ကော့​သောင်း​က​နေ​တစ်​ဆင့် ​ကု​သ​ပေး​ခဲ့​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​လွန်​ခဲ့​သော (15)​ရက်​က​နေ ​စ​တင်​ပြီး ​ကု​သ​ခဲ့​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လ​ကုန်​ရက်​မှာ ​သွေး​တိုး၊ ​ဆီး​ချို​နှင့် ​မိုင်း​ဆိပ်​များ​ကို ​လ​စဉ် ​ဆေး​စစ်​ချက်​ယူ​ရ​ပါ​တယ်။ ​မိုင်း​ဆိပ်​ဟာ ​လ​စဉ် ​ပို​ပို​ပြီး​ပျံ့​နှံ့​လာ​တဲ့​အ​တွက် ​ပို​ပို​ဆိုး​လာ​ပြီး ​ဆေး​တွေ​လဲ ​ပို​ပို​များ​လာ​ခဲ့​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လ​မှာ ​ဆေး​ကု​သ​ပြီး result ​က​တော့ ​မိုင်း​ပျံ့​နှံ့​နှုန်း 10% ​လျှော့​ကျ​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒီ့ ​သက်​သေ​အ​ထောက်​အ​ထား​များ​ကို ​ကျွန်​တော် ​ကို​စော​ကျော်​ဦး​ရဲ့ ​ခွင့်​ပြု​ချက်​ဖြင့် ​တင်​ခွင့်​ရ​ခဲ့​လျှင် ​ယ​ခင်​လ​တွေ​က ​မိုင်း​ပျံ့​နှံ့​နှုန်း​နှင့် ​ယ​ခု​လ ​လျှော့​ကျ​သည့် medical check up ​ကို ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ဆ​ရာ​ဝန်​အ​နေ​ဖြင့် ​အဲ့​လို​မျိုး 10% ​အ​ထိ ​လျှော့​ကျ​သွား​တဲ့​အ​ပေါ် ​အံ့​အား​သင့်​ပြီး ​မေး​မြန်း​တဲ့​အ​ဆင့်​အ​ထိ ​ရောက်​လာ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ကို​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ ​ခင်​မင်​ရ​တဲ့​အစ်​ကို ​စော​ကျော်​ဦး ​အ​သက် (57)​နှစ်​ဟာ ​ဖြေ​ရှင်း​လျှင် ​ယုံ​မည်​မ​ဟုတ်​တာ ​သိ​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့်​မို့ ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​ပို့​တဲ့​ဆေး​ကို​တော့ ​စား​နေ​ပါ​တယ်​လို့ ​ဆ​ရာ​ဝန်​ကို​ပြော​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဆ​ရာ​ဝန်​က ​အဲ့​ဒီ့​ဆေး​ကို ​အ​ရမ်း​စိတ်​ဝင်​စား​ပြီး ​နည်း​နည်း​လောက် ​ယူ​လာ​ပြ​ဖို့​နဲ့ ​ဓါတ်​ခွဲ​စမ်း​သပ်​ဖို့​အ​ထိ ​ပြော​လာ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တော့ ​ဒါ​တွေ​ဟာ ​သက်​သေ​သာ​ဓ​က​တွေ​ပါ. ​နိုင်​ငံ​တွေ​ဝေး​နေ​ပေ​မယ့် ​ကု​သ​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်. ​အ​သေး​စိတ်​ကို http://www.shweyinkyaw.org ​ဝဘ်​ဆိုက်​မှာ ​ရေး​ပေး​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​ပဲ ​ဂိုဏ်း​ရဲ့​အ​ပေါ်​မှာ ​နား​လည်​နိုင်​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်.
​ဝေ​ဖန်​တာ​က ​သူ​တို့​အ​လုပ် ​လုပ်​ရ​မှာ​က ​ကိုယ့်​အ​လုပ်
​ရွှေ​ရင်​ကျော်​ဣ​စ္ဆာ​သ​ယ​မ​ဟိ​ဒ္ဓိ​စေ website ​စ​တ...